Bedrock Linux: သာမန်ထက်ထူးကဲသော Linux Metadistribution | Linux မှ
Bedrock Linux - သာမန်ထက်ထူးကဲသော Linux metadistribution
များစွာသောစာပမြေား၌တည်၏ အင်တာနက်ကို နှင့် FromLinux ဘလော့ အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာသည်, အဆိုပြုချက်များ၏ကြီးမား, အခြားနည်းလမ်းများနှင့်အသုံးပြုသည် GNU / Linux Distros သူတို့ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ AND အခြေခံမူ Linux သူတို့အားကန့်သတ်၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
အခြေခံမူ Linux ၏ဒီကဗျာဖှံ့ဖွိုးတိုးတဖြစ်ပါတယ် free software ၏ပုံစံအတွက် GNU / Linux metadistribution အရာအခြေခံအားဖြင့်၎င်း၏အသုံးပြုသူများသည်ခွင့်ပြုပါတယ် များစွာသောကွဲပြားခြားနားသောအင်္ဂါရပ်များခံစားပါ၏လုပ်ဆောင်နိုင်မှုသို့မဟုတ်အကျိုးကျေးဇူးများ အမျိုးမျိုးသော GNU / Linux ကိုဖြန့်ဝေမကြာခဏပုံမှန်အားဖြင့်သော "အပြန်အလှန်သီးသန့်"ဆိုလိုသည်မှာသဟဇာတမရှိပါ။ အထူးသဖြင့် packages များနှင့် command များအရဆိုလျှင်။
၎င်း၏အတွက်၎င်း၏ developer များအရသိရသည် တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်, အခြေခံမူ Linux es:
"Uအသုံးပြုသူများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်အပြန်အလှန်သီးသန့်ဖြစ်သောအခြားဖြန့်ဝေမှုများ၏အင်္ဂါရပ်များကိုအသုံးပြုခွင့်ပြုသည့် Linux meta-distribution ။ အမှန်ကတော့, အသုံးပြုသူများသည်အလိုအလျောက်အစိတ်အပိုင်းများကိုရောနှော။ လိုက်ဖက်နိုင်သည်".
ဆိုလိုသည်မှာဥပမာအားဖြင့်ဤဆောင်းပါးတွင်အသုံးချခံရခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်တွေ့ကျမှုဖြစ်သည် GNU / Linux ဖြန့်ဖြူး MX Linux 19 o ဒေဗန် ၁၀ထည့်သွင်းပါ အခြေခံမူ Linuxနှင့်အဆုံးတွင်, ကဲ့သို့သောကွဲပြားခြားနားသော Distro သဟဇာတသို့မဟုတ်မ Arch Linux ကို, ခေါ်ကွန်တိန်နာတစ် ဦး ကြင်ကြင်နာနာအတွင်းပိုင်း အလွှာ.
သို့သျောလညျး အခြေခံမူ Linux မင်းရဲ့လက်ရှိထဲမှာ ဖွံ့ဖြိုးရေးဗားရှင်း, အ ဗားရှင်းနံပါတ် 0.7, ၏ installation ကိုထောက်ခံပါတယ် GNU / Linux Distros အောက်ပါ: alpine, မဟာ, Centos, debian, devuan, exherbo, exherbo-musl, fedora, gentoo, ubuntu, ပျက်ပြယ်နှင့်ပျက်ပြယ်-musl ။
1 အခြေခံမူ Linux
1.1 Bedrock Linux သည်အခြားမည်သည့်အရာများစွမ်းဆောင်နိုင်သနည်း။
1.2 Bedrock Linux ကို MX Linux 19 နှင့် / သို့မဟုတ် DEBIAN 10 တို့တွင်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။
Bedrock Linux သည်အခြားမည်သည့်အရာများစွမ်းဆောင်နိုင်သနည်း။
အသေးစိတ်မှာ install လုပ်နိုင်ပါတယ် အခြေခံမူ Linux ခေတ်သစ် Distro တစ်ခုပေါ်တွင်အလွယ်တကူဝင်ရောက်နိုင်သည်
အဟောင်း / တည်ငြိမ်သော CentOS သို့မဟုတ် DEBIAN ဖြန့်ဝေမှုကိုသုံးပါ။
Arch Linux ကို Install လုပ်ပြီးသင်၏မျိုးဆက်သစ် package များသို့မဟုတ် AUR repos ကိုသုံးပါ။
Gentoo portage နှင့် package များကိုစုစည်းနိုင်ခြင်း။
စီးပွားဖြစ် desktop-based software များအတွက် Ubuntu နှင့်စာကြည့်တိုက်လိုက်ဖက်မှုများကိုရယူပါ။
စီးပွားဖြစ် workstation / server-based software များကဲ့သို့ CentOS စာကြည့်တိုက်နှင့်လိုက်ဖက်ညီအောင်လုပ်ပါ။
များစွာသောအခြားဖြစ်နိုင်ခြေများအနက်။ သောကြောင့်, အခြေခံမူ Linux အခြေခံအားဖြင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်၊ တစ်စုံတစ်ရာ၌ထိုအရာအားလုံးကိုခံစားရန်စွမ်းအားကိုပေးထားသည် "မြင့်မားသောစည်းလုံးသော Operating System".
Bedrock Linux ကို MX Linux 19 နှင့် / သို့မဟုတ် DEBIAN 10 တို့တွင်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။
အခြေခံမူ Linux တရားဝင်တစ် ဦး အပေါ်၎င်း၏တပ်ဆင်ထောက်ခံပါတယ် GNU / Linux ကို DEBIAN ဖြန့်ဖြူးခြင်းလက်ရှိဗားရှင်းအပါအ ၀ င်၊ ဗားရှင်း ၁၀ (Buster)။ သို့သော်၎င်းသည်၎င်း၏တပ်ဆင်မှုကိုတရားဝင်မထောက်ခံပါ MX Linux၎င်း၏ဗားရှင်းမဆို၌တည်၏။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်တွေ့ဖြစ်ရပ်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း၊ ဖြန့်ဖြူး MX Linux ကို 19.164-bit, အလှည့်တွင်အခြေခံသည် ဒေဗန် ၁၀.
DEBIAN ဖြန့်ဝေမှုများအတွက် Installation Script - 32/64 bits ကိုကူးယူပါ
Bedrock Linux ရရှိနိုင်သည့်သင်ခန်းစာသို့မဟုတ်အသုံးပြုမှုလက်စွဲကိုကြည့်ပါ
Bedrock Linux command options နှင့် parameters များအတွက်အကူအညီကိုရယူပါ
Bedrock Linux တွင်အခြေခံ command များသုံးပါ
တပ်ဆင်ရန်ရရှိနိုင်သည့် GNU / Linux Distros များကိုစာရင်းပြုစုပါ
GNU / Linux Arch Distros သွင်းပါ
Distro တစ်ခုချင်းစီအတွက် command များသို့မဟုတ် packets များအားအတည်ပြုခြင်း (Base and Content)
Bedrock Linux တွင်ထည့်သွင်းထားသော Arch Distro တွင် command ကွပ်မျက်မှုဥပမာများ
Arch အခြေစိုက်စခန်း Update လုပ်ပါ
အမျိုးမျိုးသော package များကို Arch base တွင်တပ်ဆင်ပါ
Arch AUR Repos ထည့်သွင်းရန် repositories configuration ဖိုင်ကိုပြင်ဆင်ပါ
configuration file ၏အဆုံးသို့အောက်ပါစာသားအပိုင်းအစကိုထည့်ပါ။
configuration file ကိုသိမ်းပြီးထွက်ပါ။
Arch AUR Repos အထုပ်ကို git ဖြင့်ထည့်ပါ
Arch နှင့်အခြား Distros များ install လုပ်နိုင်လျှင်၎င်းသည်၎င်းတို့ဖြစ်သည် နိမ့်ဆုံးတပ်ဆင်မှုအခြေစိုက်စခန်းပုံရိပ်တွေစင်စစ်သူတို့ဖြစ်ရမည် အသုံးပြုသူအားဖြင့် optimized နှင့် configured package များကို install လုပ်ခြင်းနှင့် configuration files များတွင် configurations အမျိုးမျိုးပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်၎င်းတို့ကိုမျှတပြီးခိုင်မာသောအသုံးပြုမှုရရှိရန်။
၏ installation အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုထောကျပံ့ဖို့ အခြေခံမူ Linux သင်အောက်ပါစစ်ဆေးနိုင်သည် link ကိုအဘယျသို့ကြည့်ဖို့ GNU / Linux Distros အောက်ပါအတူတူပင်၏ installation ကိုလုပ်ဆောင်ရန်အသုံးပြုနိုင်ပါသည် link ကို။ နောက်ပြီး ၀ င်းဒိုး ၀.၇ ၏မည်သည့် installation script ကိုရရှိနိုင်ကြောင်းသိရန်အောက်ပါတို့ကိုပါ link ကို.
ဤအဆင့်များပြီးနောက်သင်ကိုင်တွယ်နိုင်သည် Arch Linux ကို မှအသုံးပြုသူရဲ့အရသာမှာအေးဆေးတည်ငြိမ်စွာ MX Linux ကို 19 o ဒေဗန် ၁၀သုံးပြီး အခြေခံမူ Linux.
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" ဒီအံ့သြစရာများနှင့်လိမ္မာပါးနပ်အကြောင်းကို «Distro Linux» ခေါ်ဆိုခ «Bedrock» အဘယ်အရာကိုကျွန်တော်တို့ကိုပျော်မွေ့ဖို့ကမ်းလှမ်း «lo mejor de muchas distros» တစ်ခုတည်းပေါ်တွင်တစ်ခုလုံးအတွက်အလွန်အကျိုးရှိပြီးအသုံးဝင်သည် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » Bedrock Linux - သာမန်ထက်ထူးကဲသော Linux metadistribution
အထင်ကြီးစရာကောင်းလောက်အောင်, ငါကဒီ faboritos တိုက်ရိုက် MInt နှင့် Centos အတူတကွရှိသည်နိုင်အလွန်စိတ်ဝင်စားတယ်။
မင်္ဂလာပါ, နေကောင်းလား ဟုသူကပြောသည်
Open Hub - ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ကိုရှာဖွေရန်၊